Oovimba be-SHIB-Funda ukurhweba
Shiba Inu Quiet ngoMvulo njengoko Ukuzonwabisa Okukhudlwana Kutshisa Izigidi zeeTokens
USteven Cooper, umseki wenkampani ye-crypto yokutshisa i-Bigger Entertainment, kutshanje ubhale ukuba iqela lakhe litshise ngempumelelo enye i-2.75 yezigidi. Shiba Inu (SHIB) iimpawu. Ngeli xesha, iShiba Coffee Company iphinde yabhengeza ukuba ithathe i-11,851,851.85185185 SHIB ngaphandle kokubonelela.
Kubandakanya umsitho wayo wamva nje wokutshisa, iBigger Entertainment ngoku ithumele iithokheni ezingama-889,483,100 "i-wallet engenanto," equlethe unikezelo lweengqekembe ezingafumanekiyo nakubani na ukusukela ngo-Okthobha ka-2020, xa inkampani yabhengeza ukuqaliswa kwephulo.
Ileyibhile yerekhodi esekelwe kwi-crypto iphinda ithengise i-NFTs, amatikiti eziganeko, kunye nempahla ye-crypto kwaye itshisa inxalenye yemali efunyenweyo ukuvumela abathengi ukuba baphulaphule iingoma zomculo. Ngexesha elicwangcisiweyo "Tshisa itheko" ngoDisemba 26, 2021, inkampani icinyiwe 239,600,144 iithokheni Shiba Inu.
U-Cooper naye waphawula kwi-tweet yakhe ukuba inkampani iceba ukuphucula amandla ayo okutshisa kwiintsuku ezingamashumi amathandathu ezizayo, eqaphela ukuba baceba ukuphindaphinda isantya sokutshisa kwabo ngoku njengoko befuna iindlela ezingcono zokutshisa amathokheni e-SHIB.
Ekugqibeleni, umsunguli waphawula ukuba inkampani kufuneka itshise amathokheni amaninzi kamva namhlanje. Ekupheleni kuka-2021, iqela libhengeze ukuba iziganeko zokutshiswa kwe-SHIB ziyakwenzeka rhoqo ngenyanga ngo-2022. Lilonke, ngaphezu kweebhiliyoni ezintathu zeethokheni ze-SHIB (ezixabisa i-102 yezigidi zeedola ngexesha lokushicilela) zatshiswa ngoDisemba ngamalungu ahlukeneyo oluntu lwaseShiba Inu.
Amanqanaba eShiba Inu angundoqo aza kujongwa — nge-3 kaJanuwari
I-SHIB iyaqhubeka nokurhweba ngaphakathi kwipatheni yecala ukuya kumhla wesithathu wonyaka omtsha ukususela ekubeni yawela kuloluhlu ngoDisemba 29. Njengoko bekulindelekile, imarike iye yahlala izolile ngeveki njengoko iimarike zehlabathi ziseza kuphinda ziqalise, ukunyanzela abahwebi ukuba bahlale. ecaleni.
I-SHIBUSD - Itshathi yeeyure ezi-4 kwiBinance. Umthombo: TradingView
Oko kuthethiweyo, imakethi ye-SHIB idinga ikhefu, mhlawumbi ukuya kwindawo ephezulu yepivot kwi-0.0000350 okanye isiphelo esisezantsi kwi-0.0000325 yeedola, ngaphambi kokuba kubuye umfutho. Kude kube ngoko, ucalucalulo olusecaleni luya kuqhubeka.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.0000350, i-$ 0.0000360, kunye ne-$ 0.0000375, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.0000325, i-$ 0.0000300 kunye ne-$ 0.0000280.
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 18.9 billion
Ukulawulwa kweShiba Inu: 0.85%
Inqanaba lentengiso: #13
tags Cryptocurrency, iindaba, I-SHIB, SHIBA INU, Uhlalutyo lobuchwephesha
UShiba Inu uthweswe isithsaba yeyona Cryptocurrency idumileyo ngo-2021 kwiCoinMarketCap
Uwama-2021, ngaphandle kwamathandabuzo, ibingunyaka wokuba Shiba Inu (SHIB) njengoko ingqekembe yememe iphula inqanaba emva kwenqanaba. Iingxelo ezintsha zeqonga lokulandela umkhondo we-crypto i-CoinMarketCap iveze ukuba iShiba Inu ivele njengeyona cryptocurrency ijongwe kakhulu ngo-2021, igqitha imali ephezulu ye-cryptocurrencies njengeBitcoin, i-Ethereum, kunye neDogecoin.
I-CoinMarketCap ibonise ukuba ingqekembe ye-meme irekhodwe ngaphezu kwe-188 yezigidi zeembono kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo, idlula i-Bitcoin, eyaphuma kwindawo yesibini ngemibono ye-145 yezigidi, kunye neembono ze-43 yezigidi. Imbangi ye-SHIB i-Dogecoin ifike kwindawo yesithathu kunye neembono ze-107 yezigidi, ilandelwa nguCardano kunye no-Ethereum ngeembono ze-86 yezigidi kunye ne-81 yezigidi zeembono, ngokulandelanayo.
Ngokucacileyo, uShiba Inu uneenyanga ezili-15 kuphela ubudala kodwa ubambe inombolo ye-13 kwindawo ephezulu ye-crypto rankings ngokusekelwe kwi-capitalization yemarike kunye ne-20.93 yeebhiliyoni zeedola.
Ngo-Okthobha, i-SHIB ixhume ngaphezulu kwe-133% ngeentsuku ezimbalwa ukuya kutsho kwizinga eliphezulu le-$0.000088, nto leyo etyhale imarike yayo ngaphezulu kwe-50 yeebhiliyoni zeedola. Ngelo xesha, ingqekembe ye-meme yaphakama yaya kutsho kwindawo yesixhenxe, idlula i-Dogecoin eyandulelayo.
Kwezinye iindaba, idatha evela kwinkampani yolwazi ephezulu yeGlobal Data ibonise ukuba iingxoxo zemidiya yoluntu malunga ne-SHIB zinyuke nge-16,000% ngo-2021, zinika i-cryptocurrency elona zinga lokukhula liphezulu xa kuthelekiswa namanye ama-cryptos akwinqanaba eliphezulu ali-10.
Amanqanaba eShiba Inu angundoqo aza kujongwa — nge-27 kaDisemba
I-SHIB irhweba ngethoni ezolileyo kude kube kusasa ngoMvulo phakathi kokunqongophala okanye ukungazinzi ngenxa yexesha leziyunguma. Nangona kunjalo, i-meme coin irekhode iseshoni esebenzayo kakhulu izolo emva kokubuyisela unyawo olungaphezulu kwe-0.0000375, ebonisa ukuba isantya sokurhweba sihlala sisemarike, nangona isantya sokunciphisa.
Oko kuthethiweyo, kufuneka silindele ukubona ukuqhubeka okucothayo kunye nokuzinza kwe-bullish ukuya kwinqanaba elibalulekileyo le-0.0000400 yeedola kwiintsuku ezizayo. Uqikelelo lwam lwe-bullish luza kulandela uqwalaselo lokuba i-SHIB ngoku irhweba ngaphezulu kweendawo zam ezininzi zobugcisa, nto leyo ebonisa ukuba indlela yokungaxhathisi iya phezulu.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.0000390, i-$ 0.0000400, kunye ne-$ 0.0000420, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.0000375, i-$ 0.0000360 kunye ne-$ 0.0000350.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.39 zezigidi
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 20.9 billion
Ukulawulwa kweShiba Inu: 0.87%
tags Cryptocurrency, iindaba, I-SHIB, SHIBA INU, Uhlalutyo lobuGcisa
UShiba Inu uLahle iWhale Dominance phakathi kweBearish Price Action
Shiba Inu (SHIB) ilahlekelwe sisiqwenga esikhulu solawulo lwayo phakathi kweminenga ephezulu ye-Ethereum eyi-1,000. Olu tshintsho luye lwacaca ngakumbi emva kokuba ingqekembe yememe yehle ngaphezulu kwe-12% ngenxa yokuguqulwa kwasekhaya.
Njengoko umzi-mveliso we-GameFi ugqitha kumzi-mveliso we-crypto kwi-buarishness, abanye abahlalutyi babona ukuba iingqekembe ze-meme, ezifana ne-Shiba Inu, sele ziqalisile ukuzinza kwizigaba ezibotshelelwe kuluhlu okanye kwiindlela zokuthwala, ezinokudala ilahleko kwimalike yemalike ye-crypto ngokubanzi.
Esinye isalathisi esiqhelekileyo kulawulo phakathi kweeasethi ezahlukeneyo zedijithali. Njengolawulo kwi-asethi ekhethiweyo yehla, iminenga ikholisa ukusasaza iimali zayo kwezinye ii-asethi njengothango. Ngenxa yokuba iithokheni ze-GameFi kunye ne-Metaverse ziyi-raves yelo xesha, iminenga iye yahambisa imali yayo ngokuthe ngcembe kula macandelo.
Ngaphandle kokuphulukana ne-12% kulawulo lomnenga (ukusuka kwi-20% ukuya kwi-8%), i-SHIB izidla ngexabiso le-USD elimalunga ne-2 yeebhiliyoni zeedola.
Iminenga kusenokwenzeka ukuba ibambe isixa esifanayo samathokheni, okwangoku, kodwa ayongezi izikhundla zayo kwi-SHIB. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, oku kuza phakathi kokusebenza okuphantsi kophawu kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Ngapha koko, iingxelo zibonisa ukuba iminenga ngoku ibambe ngaphezulu "ezinye iimpawu," njengeealtcoins ezincinci ezinamacapitalis amancinci amancinci, okwenza kube nzima kakhulu ukulandela.
Amanqanaba eShiba Inu angundoqo aza kujongwa — nge-3 kaDisemba
Ukulandela i-bullish breakout ngoLwesibini, i-SHIB irekhode ukuphakama kweeveki ezininzi kufuphi ne-$ 0.0000550 kodwa ayizange ikwazi ukugcina i-rally kwaye yehla kwi-0.0000420 inkxaso. Nangona kunjalo, i-meme yesibini ngobukhulu ingqekembe iye yaphuma kwi-trendline entsha enyukayo ukuze ibuyise i-axis ye-$ 0.0000440.
Ngoluvo oluphezulu lwangoku kwimarike ebanzi, sinokubona ukuphinda kuhlolwe isiseko se-pivot se-$0.0000500 njengoko sisiya kwimpelaveki. Kwakhona, ndilindele ukuba nayiphi na intshukumo entsha ye-bearish kwi-SHIB kwiiyure okanye iintsuku ezizayo ukuba igxothwe yindlela encinci yokunyuka.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.0000500, i-$ 0.0000550, kunye ne-$ 0.0000600, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.0000420, i-$ 0.0000400 kunye ne-$ 0.0000375.
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 24.1 billion
Ukulawulwa kweShiba Inu: 0.91%
I-Shiba Inu iyaqhubeka kwi-Bearish Row njengoko iQela le-SHIB lilumkisa uluntu kwii-Scams eziqhubekayo
The Shiba Inu (SHIB) Iqela lilumkise uluntu ukuba luhlale luthe qwa ngokuchasene nobuqhophololo obuqhubekayo kwi-intanethi obujoliswe kubatyali-mali be-SHIB okanye abanomdla.
Isilumkiso sobuqhophololo sivela kwi-tweet evela kwisikhululo se-Twitter se-Shiba Inu (@Shibtoken) izolo, echaza amaqhinga ahlukeneyo asetyenziswa ngaba badlali babi ukukhohlisa amaxhoba angabonakaliyo kuluntu lwe-SHIB. I-tweet yaphawula ukuba:
“Hlala uqaphile kwaye ukhuselekile #ShibArmy!
Siye saziswa ngobuqhophololo obutsha, ukuhamba kweendaba zoluntu, kunye namanye amaqonga onxibelelwano.
Nantsi ividiyo ekhawulezayo ukunika ulwazi oluninzi ngalo mbandela. ”
I-tweet yaphinda yaphawula ukuba: “Iqela lomgunyathi likaShiba Telegram kwabelwana ngalo kuwo onke amajelo eendaba ezentlalo. Abaqhatha bazenza iiakhawunti ezisemthethweni kwaye benze abasebenzisi bomgunyathi. Aba baqhatha baphendula kwizithuba eziqhelekileyo. "
Impumelelo yakutshanje ye-SHIB iye yatsala amawaka-mali kunye nabarhwebi, abaninzi babo banethemba lokuba yi-crypto millionaires kunye neebhiliyoni. Nangona kunjalo, abadlali ababi basebenzise lo mnqweno ngabaninzi kwaye bajolise abatyali-mali abangabonakaliyo kumaqonga eendaba ezentlalo njengeTelegram kunye ne-Twitter. Enye yeendlela ezixhaphakileyo ezisetyenziswa ngabaqhathi kukunxibelelana namaxhoba anokuba ngamaxhoba phantsi kwesazisi sobuxoki, njengokuzenza iiakhawunti ezisemthethweni okanye abasebenzi.
Oko kuthethiweyo, isilumkiso sobuqhophololo sicacisile ukuba uluntu okwangoku alunikezeli naluphi na uhlobo lonyuso, kubandakanya i-airdrops, iibhonasi, izipho, okanye izipho. Isilumkiso sikwathi abatyali mali kufuneka bayeke ukwabelana ngolwazi lweakhawunti ebuthathaka, njengezitshixo ze-wallet, nabani na okwi-intanethi kunye nokujoyina okanye ukulandela iiakhawunti zobuxoki zoluntu.
Amanqanaba eShiba Inu angundoqo ekufuneka abukele — nge-22 kaNovemba
Ngaphandle komzamo onesidima wokwenza izinto ngolwesiHlanu odlulileyo, uShiba Inu uyaqhubeka nokurhweba kunye ne-trendline yam yeeveki ezine ezinde. Nangona kunjalo, umzamo we-bullish wangoLwesihlanu uncede i-SHIB ukuba ijike ukusuka ngezantsi kwe-trendline ukuya kumda ongaphezulu, ngaloo ndlela inciphisa uxinzelelo lwe-bearish ukusuka kwi-trendline.
Oko kuthethiweyo, i-cryptocurrency yeshumi elinesibini inkulu ngoku irhweba ngoluvo lwe-bullish kancinane ngoMvulo kusasa phakathi koguqulo olubukhali kwimakethi ebanzi. Ndilindele ukubona i-bullish swing kuqala kwi-50 SMA kwi-$ 0.0000482, ilandelwa kukuhlaziywa kwe-0.0000500 yokuchasana kwengqondo. Nangona kunjalo, ukusilela ukuthumela ikhefu eliqinisekileyo ngaphezulu kweyangaphambili kunokuthintela amaxabiso ecaleni kwendlela yam, ukutyhala i-SHIB kufutshane ne-0.0000400 ephantsi.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.0000482, i-$ 0.0000500, kunye ne-$ 0.0000550, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.0000440, i-$ 0.0000420 kunye ne-$ 0.0000400.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.58 zezigidi
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 24.5 billion
Ukulawulwa kweShiba Inu: 0.95%
Inqanaba lentengiso: #12
I-Shiba Inu Plummet phakathi kwe-Wave "yeendaba ezimbi" ze-Crypto Industry
Shiba Inu (SHIB) ufumene idiphu enkulu kule veki phakathi kwemikhosi ye-bearish ebukhali emsebenzini kwimarike. Uninzi lwe-cryptocurrencies luqhube ngokungathandekiyo ngokunjalo, uninzi lokurekhoda olunedijithi ezimbini zehla ukusukela ekuqaleni kweveki.
Inkathazo yaqala xa i-China (ixesha leshumi leshumi) yatshitshisa imisebenzi yemigodi yeBitcoin. Emva koko, abatyali-mali baye baphazamiseka ngokuvunywa kokugqibela kwebhili yezakhiwo zase-US, oku kuthetha ukuba abatyali-mali abasebenzisa iinkonzo ze-crypto ezisekelwe e-US baya kuqalisa ukuhlawula irhafu ngo-2024. Ezi, zidibene nedola eyomeleleyo, zavula isihogo kwishishini le-crypto kwiminyaka embalwa edlulileyo. iintsuku.
Ukongeza, i-SHIB ihlupheke ngakumbi ngexabiso lexabiso le-bearish emva kweengxelo zokuba ukuthengiswa okukhulu kweminenga kunokunyuka kwixesha elikufutshane. Ngokucacileyo, iingxelo zibonisa ukuba malunga nesibini kwisithathu sayo yonke iShiba Inu ejikelezayo ihlala kwizipaji ezilishumi nje.
Oko kuthethiweyo, ibingezizo zonke iindaba ezimbi kubaphathi be-SHIB kule veki. I-SHIB irekhode i-spike emfutshane ekuqaleni kwale veki, kulandela isibhengezo sokuba i-AMC Entertainment iza kwamkela i-SHIB njengentlawulo yamatikiti kunye nemvumelwano, iqala naphi na phakathi kweentsuku ezingama-60 ukuya kwezili-120.
Kwakhona, utshintshiselwano olukhulu lwe-crypto uGemini ubhengeze ukuba uceba ukongeza i-SHIB kwibhaskithi yayo yokunikezela. Ekugqibeleni, i-ZenGo, isipaji se-cryptocurrency esingenasitshixo esingenasitshixo, sibhengeze ukuba yongeza inkxaso ye-SHIB kule veki.
Amanqanaba eShiba Inu angundoqo ekufuneka abukele — nge-19 kaNovemba
I-SHIB iye yehla kakhulu kwiiveki ezintathu ezidlulileyo emva kokuba inyuke kwi-0.0000885 yeedola. Ingqekembe ye-meme ihleli ingakwazi ukwaphuka ngaphezu kwe-trendline yam yokuhla kangangeeveki ezintathu njengoko irekhode eyona ndawo iphantsi ukusukela nge-25 ka-Okthobha.
I-SHIBUSD - Itshathi yeyure kwiBinance. Umthombo: TradingView
Oko kwathiwa, i-cryptocurrency yeshumi elinanye inkulu ngoku isondela kulo mzila kwakhona kwaye kufuneka ithumele isigxina esiqinileyo ngaphezu kwalo mgca ukuphula i-jinx. Ukungaphumeleli ukuvala ngaphezu kweli nqanaba kugcina i-bearish momentum kwaye kunokubeka i-SHIB ekuhlanganiseni phakathi kwe-$ 0.0000470 kunye ne-$ 0.0000420.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.0000500, i-$ 0.0000550, kunye ne-$ 0.0000600, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.0000450, i-$ 0.0000420 kunye ne-$ 0.0000400.
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 25.6 billion
Ukulawulwa kweShiba Inu: 0.99%
Inqanaba lentengiso: #11
Shiba Inu Trades Flatly Around Around $0.0000525 Nangona Top Exchange Listings
Utshintshiselwano lwe-crypto olusekwe e-US u-Kraken uye wachaza ukuba kunokwenzeka ukudweliswa Shiba Inu (SHIB) kule veki emva kokwenza i-tweet efanayo ekuqaleni kwenyanga. Icebiso livela kuMphathi weMveliso weKraken okhokelayo uBrian Hoffman obhale kwi-Twitter iShiba Inu Gif enesihloko esithi. "Ndiziva kamnandi ngale veki izayo."
Ngeli xesha, iqonga elikhulu lokurhweba elisemthethweni leqonga le-Twitter labhala nge-2 kaNovemba ukuba i-tweet ethile inyuke yaya kuthi ga kwi-2,000 yokuthandwa, iya kudwelisa i-SHIB ngosuku olulandelayo. Ngosuku olulandelayo, i-tweet exeliweyo yayiqokelele ngaphezulu kwe-80K kunye ne-4K retweets, kodwa uKraken wasilela ukugcina ilizwi labo, ekhokelela abaninzi ukuba bakholelwe ukuba i-tweet yayiyinto nje yokupapashwa.
Nangona kunjalo, emva kweentsuku ezimbalwa, u-Kraken waphendula kwi-tweet yasekuqaleni ephawula ukuba bayivile i-$ SHIB yoluntu kwaye bayiqalisile inkqubo yabo yokuphonononga uluhlu.
Ingcebiso yoluhlu lukaKraken lwe-SHIB oluhlaziyiweyo luza kwiintsuku ezimbalwa emva kolunye utshintshiselwano lwe-cryptocurrency olukhulu lwase-US, iGemini, edweliswe nguShiba Inu. Utshintshiselwano lwe-crypto ludwelise i-SHIB kunye nezinye iithokheni ezininzi ezihamba phambili. Ngeli xesha, olunye utshintshiselwano oluphezulu lwe-crypto olunje ngeBinance kunye neCoinbase zongeze izibini zokurhweba ezongezelelekileyo ze-SHIB phakathi kwemfuno emandla.
Oko kwathiwa, abaninzi abanomdla bakholelwa ukuba uluhlu loluhlu kutshintshiselwano oluphezulu lunokubangela ukuba inkunzi entsha iqhutywe kwingqekembe ye-meme.
Amanqanaba eShiba Inu angundoqo ekufuneka abukele — nge-15 kaNovemba
Nangona uluhlu lwakutsha nje lweGemini kunye nolucetywayo olucetywayo nguKraken, i-SHIB iyaqhubeka nokurhweba ngokukhawuleza malunga ne-$ 0.0000525 indawo. Oku kuza phakathi kokuhamba okuzinzileyo ecaleni kwendlela yam yokuhla ebude beeveki ezintathu, ixhaswa yi-200 SMA yethu yeyure.
I-SHIBUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
Nangona kunjalo, i-50 SMA yethu yeyure iyaqhubeka nokuxhasa ingqekembe ye-meme kuxinzelelo lwe-bearish. Oko kwathiwa, i-SHIB idinga ukukhusela ikhefu elicocekileyo ngaphezu kwe-$ 0.0000535 - i-$ 0.0000550 indawo yokumelana ukuze iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ibuyele phezulu. I-cryptocurrency yeshumi elinanye inkulu idinga ukuthumela intshukumo ephezulu ngokukhawuleza okanye uthintelo lomngcipheko ecaleni kwendlela eyehlayo ukuya kwi-0.0000500 yeedola kwaye isezantsi kwiiyure kunye neentsuku ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.00005500, i-$ 0.00006000, kunye ne-$ 0.00006500, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.00005000, i-$ 0.00004500 kunye ne-$ 0.00004200.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.87 zezigidi
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 29.6 billion
Ukulawulwa kweShiba Inu: 1%
UShiba Inu uphantsi koxinzelelo olumandla lokuthengisa njengeyeThathu-Largest SHIB Whale Moves Holdings
The Shiba Inu (SHIB) Ukugxininiswa kobunini kuye kwajongwa njengoko ingqekembe yememe iqhubeleka nokutyibilika ukusuka phezulu. Ngokweengxelo, kwii-872,382 wallets ezibamba i-SHIB, zilishumi kuphela ezilawula i-72% yokunikezelwa okupheleleyo.
Iingcali ziye zabonisa ukukhathazeka kwazo ngale meko kwaye nangona ubuninzi bokungafihli kwishishini le-crypto, phantse akunakwenzeka ukudibanisa izikhwama kubanini bazo. Banexhala lokuba oku kungaziwa kushiya abathathi-nxaxheba bemarike bengazi malunga nokugxilwa kwe-whale kunye nemisebenzi echaphazela amaxabiso.
I-Shiba Inu itsale inqanaba elibalulekileyo le-buzz emva kokuba iguqule i-Dogecoin ukuba ibe yi-cryptocurrency yesithoba ngobukhulu ngokuqikelelwa kwentengiso kwiveki ephelileyo. Oko kuthethiweyo, onke amehlo akumnenga we-SHIB olawula ngaphezulu kwe-13% yobonelelo olujikelezayo lwengqekembe yememe.
Ngeli xesha, ukuxinana kwesipaji somnenga kubangele ukuxhalaba malunga nemiba enokubakho yemali ekhoyo phakathi koxinzelelo olukhulayo lokuthengisa kwi-SHIB okwangoku. Ngexesha lokushicilela, i-cryptocurrency yeshumi elinanye inkulu iye yehla ngaphezu kwe-10% kwiiyure ezidlulileyo ze-24 kunye ne-29% kwiintsuku ezisixhenxe.
Ngelixa kungekathengiso lwethokheni lwenzekile kwisipaji somnenga esikhankanywe ngaphambili, le dilesi ihambe malunga ne-10 yetriliyoni ye-SHIB ukuya kwiidilesi ezine ezisanda kwenziwa, oko kubangela uloyiko lokubhangisa.
Okubangel 'umdla kukuba, umsebenzi wokuthengiselana kwinethiwekhi ye-SHIB urekhode ukwanda kwe-exponential, okomzuzwana kudlula ezinye iinethiwekhi eziphezulu ezifana ne-Ethereum (ETH) kunye ne-Solana (SOL). Oku kwanda komsebenzi kubangelwa uxinzelelo lokuthengisa kwinethiwekhi ye-SHIB, njengoko abanini balahla amathokheni abo ukuze baqonde inzuzo evela kwi-rally yakutshanje.
Amanqanaba eShiba Inu angundoqo ekufuneka abukele — nge-5 kaNovemba
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uShiba Inu ukwimeko entle kakhulu njengoko abarhwebi bebhala inzuzo. Imali ye-meme iphantsi kwi-0.00004312 izolo ngaphambi kokutsiba kufuphi ne-$ 0.00005500 yokuchasana. Oku kutsiba kusilele ukuvelisa iziphumo ezinqwenelekayo kubanini be-SHIB njengoko imali ye-cryptocurrency yehla kwakhona ukuya kwi-0.00004500.
Nangona kunjalo, i-cryptocurrency yeshumi elinanye inkulu ibuyele kwakhona kufuphi ne-$ 0.00005500 yokuxhathisa njengoko iinkunzi zenkomo zizama ukubuyisela elo nqanaba kunye nokutyhala ixabiso eliphezulu. Oko kwathiwa, inqanaba elibalulekileyo leenkunzi zeenkomo okwangoku yi- $ 0.00006000 yezengqondo, apho ukwehla kwam kwi-trendline ukusuka kwi-ATH yamva nje kuhlala.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.00005500, i-$ 0.00006000, kunye ne-$ 0.00006500, kwaye amanqanaba am angundoqo enkxaso yi-$ 0.00005000, i-$ 0.00004500, kunye ne-$ 0.00004200.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.72 zezigidi
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 27.4 billion
Indawo yokulahla inkunkuma eShiba Inu Iimbali zokulahla iNkunkuma + I-350% yeRally
Emva kokurekhoda i-rally ebukhali engama-350% phantsi kweentsuku ezisixhenxe ekuqaleni kuka-Okthobha, uShiba Inu (SHIB) wehlelwa li-41% yokuhla phakathi kokulahla okukhulu kwithokheni kwimbali yayo yorhwebo, iingxelo zeSantiment. Ukulandela uluhlu lwayo lweBinance ngoMeyi, i-SHIB irekhode impompo ye-250% kodwa kamva yafumana i-50% yokwehla kwiintsuku ezimbini. Nangona kunjalo, ukuhla kwe-40% kutshanje kwenzeke kwikhandlela yosuku olunye.
Ngokwedatha ye-on-chain, iiakhawunti ezincinci ezibambe phakathi kwe-1 ukuya kwi-10 yezigidi zeengqekembe zibangele ukubuyela umva. Iingxelo zibonisa ukuba eli qela labanini lilahle ngaphezulu kwe-30 yezigidigidi ze-SHIB ngqo kwintengiso, eyayinyanzelisa uxinzelelo olukhulu lokuthengisa. Ngenxa yenani lezikhundla ezixhotyiswe kakhulu kwimarike kunye nokubaleka kwenkunzi yenkomo yangoku, I-SHIB yaswela imimandla yenkxaso eqinileyo kwiincwadi zoku-odola.
Nangona kunjalo, i-SHIB ifumene isiqingatha ukusuka kubuyiso lwamva nje kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. Iithokheni ezilahliweyo ezingama-30 ezigidi zeerandi zagqitywa 'ngabarhwebi abancinci' ababeke ii-odolo emva kokubona ukukhula kwengqekembe.
Nangona kunjalo, i-SHIB ihlala i-asethi enexabiso eliphakamileyo kunye nevolthi, kunye nevolumu yayo kwiimveliso ezivela kwimigangatho ephezulu. Iingxelo zibonisa ukuba isixa esikhulu sezikhundla ezixhuzuliweyo kwizibini zokurhweba ze-SHIB zinokukonyusa ukubuyela kwakhona.
Amanqanaba aphambili eShiba Inu ukubukela-Okthobha 11
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uShiba Inu urekhode ukuhla okubukhali kwisithintelo se- $ 0.000035 njengoko abarhwebi bethatha inzuzo etafileni. Emva koko, sabona intlawulo ekwi-bullish ukuya kwinqanaba lezengqondo le- $ 0.000030, elilandelwa yenye into eyala ukuya kwi-0.000025 ephantsi ngoMgqibelo.
I-SHIBUSD-4- Itshathi yeYure
Namhlanje, i-SHIB iphinde yaphinda yaxhathisa i- $ 0.000030 kodwa yehluleka ukuthumela ukuqhubeka okuqhubayo kwaye ingaqhubeka nokuzabalaza ingezantsi kweli nqanaba kwiiyure ezizayo.
Nangona kunjalo, i-cryptocurrency yeshumi elinethoba inkulu kakhulu ithengisa nge-12.4% kweziyure zingama-24 zidlulileyo, ibonisa ubukho obukhulu be-bullish. Oko kwathethi, silindele ukubona ukuqhubeka okuqhubekekayo kwakamsinya nje ukuba iinkunzi zeenkomo zikwazi ukucima isithintelo se-0.000030 yengqondo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.00002500, $ 0.00002750, kunye ne- $ 0.00003000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.00002000, $ 0.00001700, kunye ne- $ 0.00001500.
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 11.3 billion
Ukulawulwa kweShiba Inu: 0.48%
Shiba Inu: Isikhokelo esikhawulezayo
UShiba Inu (SHIB) uye waba lolunye lolona phuculo lulandelweyo luluntu nge-crypto yoluntu emva kwexesha. I-SHIB ithathelwa ingqalelo ngabaninzi njenge-Dogecoin-knock-off, ithathela ingqalelo ukuba ikwasebenzisa nenja edumileyo yaseJapan uShiba Inu njengemascot yayo. Ukongeza, zombini i-cryptocurrency iqale njengehlaya.
Oko kwathethi, zombini ezi projekthi zinempawu ezithile eziphawuleka. Iqela lophuhliso elingaziwayo emva kwengqekembe yememe ebhale iqonga an "Ulingelo kulwakhiwo lolwakhiwo loluntu oluzenzekelayo." Iqela likwaqinisekisa ukuba i-Shiba Inu yeyona ndlela isebenzayo kwi-Dogecoin kwaye sele ibiza igama lomthi njenge "Dogecoin umbulali."
I-Meme Coin Trend
Okwangoku, imarike yememe yimeko yedolophu. Njengomphumo wokunyuswa okuthe gabalala kokunyuselwa ngabantu abadumileyo kunye nabantu abadumileyo, iimali zemali ezifana ne-SHIB kunye ne-DOGE zirekhode ukwamkelwa okukhulu kunye neenzuzo.
Ngokukodwa, iimali zemali ze-meme azinyanzelekanga ukuba ziphucule okanye zivelise ngaphambili kubuchwephesha. Zizinto ezininzi zentlalo.
Ukufumana iTrend Trend
Abatyalomali kunye nabarhwebi abaphosiweyo kwi-Dogecoin frenzy yokuqala abanakulinda ukufumana izandla zabo kwinto enkulu elandelayo. UShiba Inu ubonakala elungele lo mnqweno ngokugqibeleleyo kwaye ubekwe endaweni entle ukuze asebenzise ulonwabo kwimveliso ye-crypto.
Ngokwe-CoinMarketCap, i-SHIB inexabiso lentengiso ye-6.88 yezigidigidi. I-cryptocurrency ibhale ukonyuka okungaphezulu kwama-30,000% kwiveki ephelileyo. Oku kungakholelekiyo kubeka ukukhula kwenethiwekhi kwi-2,000,000% ukusungulwa kwayo ekupheleni kwe-2020.
Ukukhula kwe-behemoth kweShiba Inu kukhokelela ikakhulu kwizinga lokutshintshiselana okukhulu kuluhlu lwethokheni.
IShiba Inu (SHIB) ichaziwe
I-SHIB luphawu olusekwe e-Ethereum, ithokheni ye-ERC-20, kwaye iyonwabela amandla kunye nenkxaso yenethiwekhi ye-Ethereum.
I-SHIB luphawu olusebenzisayo lwasekhaya lwenethiwekhi yeShiba Inu. I-SHIB izalisekisa imisebenzi emininzi, kubandakanya ukuhlawulwa kwemali kunye nembuyekezo kwinethiwekhi kunye neenjongo zokuqikelela. I-cryptocurrency isebenza ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo ngenxa yokubamba kwayo kwi-Ethereum blockchain.
Ekumiselweni, iqela elalisemva kwe-SHIB lathambisa iithokheni ezi-quadrillion, isiqingatha sazo sathunyelwa ngokungacelwanga kwidilesi yomseki-mbumba wase-Ethereum uVitalik Buterin. Iqela lithumele i-505 trillion ye-SHIB ukuba "itshiswe," enciphisa ukubonelela kunye nokunyusa ibango kunye nexabiso.
I-Ethereum okwangoku, ngaphandle kwamathandabuzo, sesona sicelo sikhulu sokwabelwa indawo kunye neethokheni zokubamba ibhloko ye-blockchain emhlabeni. Inethiwekhi ixelwe ukuba ixhase ngaphezulu kweetokheni ezingama-200,000 kunye namawaka othungelwano kwindalo yayo.
I-SHIB ifumaneka ngokulula kunaniselwano olufana neBinance, iHuobi Global, kunye ne-OKEx. Kwangokunjalo, abathengisi banokuthenga i-SHIB kunaniselwano olusasazekileyo (i-DEX) njenge Uniswap, 1inch, kunye ne-0x.
tags Cryptocurrency, iindaba, I-SHIB, SHIBA INU